टोलेडो मा बुटिक होटल | यात्रा समाचार
टोलेडो मा बुटिक होटल
मारिएला क्यारिल | | आवास, España
मलाई विश्वास छ कि जब तपाईं पुरानो शहरको भ्रमण गर्नुहुन्छ, यसमा रहनु उत्तम हुन्छ होटलहरूसँग शैली छ वा ती ऐतिहासिक भवनहरूमा काम गर्छन्, शताब्दी। भ्रमणमा आकर्षण जोड्नुहोस्, के तपाईंलाई लाग्दैन?
उदाहरणका लागि, Toledo यो एक अद्भुत स्पेनिश शहर हो र यसको ऐतिहासिक केन्द्र शानदार छ र बस्नको लागि उत्तम स्थान हो। यही कारणले गर्दा मैले आवासको सर्तमा विकल्पहरू खोजे जुन यहाँ अवस्थित थिए र सिफारिस गरिएको थियो। आज त्यसपछि टोलेडो मा आकर्षण संग होटल।
1 होटल पिन्टोर एल ग्रीको
2 होटल कार्लोस भि
3 होटल Casona डे ला रेना
5 होटल बुटिक एडोल्फो
होटल पिन्टोर एल ग्रीको
यो एक होटेल हो चार तारा श्रेणी जुन अलामिलोस डेल ट्रानिसो सडकमा अवस्थित छ, यहूदी क्वार्टर मा। यो एल् ग्रीको संग्रहालय र सुन्दर सान्ता मारिया ला ब्लान्का सिनागगबाट केही मिनेट पैदल छ र फुनेसलिडा प्यालेसको एकदम नजीक छ। यो पुरानो निर्माण होईन तर यो यस्तो देखिन्छ।
होटेल यसमा flo 57 कोठा पाँच तलामा फैलिएका छन्। सबैसँग वातानुकूलन र नि: शुल्क वाइफाइ इन्टर्नेट जडान, निजी बाथरूम र डिजिटल च्यानलहरूका साथ टेलिभिजन छ। त्यहाँ स्ट्याण्डर्ड जुम्ल्याहा, राम्रो जुम्ल्याहा, जोडाहरू + अतिरिक्त, जुम्ल्याहा राम्रो + अतिरिक्त र डबल कोठाहरू छन्। यदि तपाईं अधिक लक्जरी चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ प्रीमियम कोठाहरू छन्, जसमध्ये सबै भन्दा उत्तम निस्सन्देह एक गुफाको साथ प्रीमियम कोठा हो।
पूरा होटल क्लासिक र आधुनिक बीचको शैली छ। भवन पनि छ एक पोर्च, मालिश सेवा छ र घरपालुवा जनावरहरुलाई स्वीकार्नुहोस्। भित्र एक रेस्टुरेन्ट छ र अब बिदा आउँदैछ कि त्यहाँ एक नयाँ वर्ष र नयाँ वर्ष को पूर्व संचय मेनू छ। यदि तपाइँ छुट्टिहरू खर्च गर्न वा जाडोमा जान चाहानुहुन्छ भने म तपाईंलाई चेतावनी दिन्छु त्यहाँ ११/२24 देखि १२/२ सम्म कालो फ्राइडे छ डिसेम्बर २ and र मार्च between१ को बिचमा रहन्छ जुनaको लागि हो %०% छुट छ।
होटल कार्लोस भि
यो एक होटेल हो तीन वर्ग तारा जुन प्लाजा होमो माग्डालेनामा छ, शहरको मुटु। प्रस्तावहरू Rooms 67 कोठा भवनमा जुन हालसालको मर्मत र मर्मत गरिएको छ, र ती सबैलाई विभाजित गरिएको छ मानक र प्रीमियम कोठा। सबैसँग वातानुकूलित र केन्द्रीय ताप, बाथरूम, प्रत्यक्ष डायल टेलिफोन र उपग्रह र केबल टिभी छ। वाइफाइ नि: शुल्क छ, त्यहाँ पट्टि, पार्कि and र एलिभेटर छ।
होटल को रूप मा एक महान स्थान छ यो मुख्य वर्गदेखि २०० मिटर मात्र छ, Alcázar को छायाँ अन्तर्गत, केवल १० मिनेट AVE रेल स्टेशन बाट र बस टर्मिनलबाट, र तीन ऐतिहासिक प्लाजा डे Zocodover बाट। भवन 40० दशकको पछिल्लो हो, वास्तवमा यो एक अस्पताल मानिन्थ्यो, तर मैले भनें यो पुनर्निर्मित गरिएको छ। प्रसिद्ध व्यक्तिहरू जस्तो क्याथरीन डीन्यूव, लुइस बुवेलको निर्देशन अन्तर्गत, जोन वेन, रीटा हेवर्थ, रक हडसन वा अधिक हालसालै जनी डिपप.
होटल कार्लोस वी छ एकल, डबल, ट्रिपल कोठाहरू, जाकूजीको साथ, टोलेडोको अवलोकनका साथ, सबै पुनर्निर्मित, सबै धेरै आरामदायक। एकल कोठा करिब आठ, नौ वर्ग मीटर, १ 13 र १ meters मिटर बीचको दुबै हो, उही हाइड्रोमासेजको साथ प्रीमियम डबल कोठा हो, र ट्रिपलको समान आकार छ।
बिहान, होटल रेस्टुरेन्टको लाउन्जमा, यसको प्रख्यात छ desayuno मुडेजर, र दिउँसो त्यहाँ सुन्दर छतमा बस्नु भन्दा राम्रो अरू केही छैन कार्लोस छत, जो अल्काजार, क्याथेड्रल र सबै टोलेडो को महान विचारहरु छ। र केवल २०० मिटर कारबाट कारमा सर्ने पाहुनाहरूका लागि त्यहाँ संरक्षित पार्किंग छ जसको लागि एक दिनको १ 200 यूरो लाग्छ।
होटल Casona डे ला रेना
यो होटल पनि हो तीन वर्ग तारा र यो Carreras सैन सेबस्टियन सडकमा अवस्थित छ। यो रोन्डा डि टोलेडोमा छ, यहूदी क्वार्टर र क्याथेड्रलबाट पाँच मिनेट। यो अहिले सम्म उल्लेख गरिएको होटेलहरूको सबैभन्दा नयाँ हो जुन यो २००० सालको हो। होईन, यो १ XNUMX औं शताब्दीदेखि पुरानो टोलेडो घरको जगमा निर्माण गरिएको थियो।
होटल छ तीन फ्लोरमा २ rooms कोठा। २२ डबल कोठा हुन्, दुई साधारण र एउटा सूट हो। सबै केन्द्रीय वातानुकूलन, हेअर ड्रायर, सेटेलाइट वा केबल टिभी संग बाथरूम, सुरक्षित, मिनीबार र सुरक्षित छ। माथि जानको लागि त्यहाँ एक लिफ्ट छ। होटल पनि एक बार, एक टिभी कोठा र एक रेस्टुरेन्ट छ। इन्टर्नेट पहुँच एक विशेष कोठा वा वाइफाइबाट हो।
यो होटल घरपालुवा जनावरहरुलाई अनुमति दिदैन। तपाइँ प्रति रातe44 यूरो बाट गणना गर्नु पर्छ र यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै वेबसाइट मार्फत सीधा बुक गर्नुहुन्छ तपाइँसँग छ %% छुट।
यो १ th औं शताब्दीको होटल छ तीन तारे वर्ग र ऐतिहासिक केन्द्र मा रियल डेल अर्राबल मा छ। यो प्लाजा डे जोकोडओभरबाट क्रिस्टो डे ला लुज र प्युर्टा डेल सोलको अगाडि छ, र यो हो सुन्दर पर्दाफास इट्टा र फलामको निर्माण। Alcázar meters०० मिटर टाढा छ, उही प्रिमडा क्याथेड्रल र सान्तो तोमेको चर्च जुन एल ग्रीको 600०० मिटर टाढाको चित्रको साथ छ।
होटेल यो पारिवारिक वातावरण हो र कोठाहरू, सरल भएता पनि प्रशस्त र कार्यशील छन्। त्यहाँ छन् Rooms 54 कोठा जम्मा, सतह को १ 16 र १ square वर्ग मिटर बीच। त्यहाँ कोठा छन् एकल, डबल, जुम्ल्याहा र परिवार। सबैसँग व्यक्तिगत तताउने र वातानुकूलित, सीधा डायल टेलिफोन, डेस्क, फ्ल्याट स्क्रिन टिभी र पूरा बाथरूम छ।
होटल पनि प्रदान गर्दछ दैनिक मेनूको साथ बुफे ब्रेकफास्ट र रेस्टुरेन्ट सस्तो मूल्यमा।
होटल बुटिक एडोल्फो
यो एक होटेल हो चार स्टारहरू प्लाजा डे Zocodover मा सीधा अवस्थित, प्युर्टा डेल सोल डे टोलेडोबाट केवल २०० मिटर र शहरको टुरिष्ट आकर्षणहरू। र राम्रो कुरा त्यो हो सबै कोठा वर्ग को राम्रो विचार छ र ती मूल्यहरु संग धेरै सहज छन् १०१.२० युरो बाट रात मात्र आवास संग।
होटलले बुटिक कोठा, एकदम परिष्कृत, स्क्वायर, समकालीन डिजाइन र square० वर्ग मीटर र संगमरमरको बाथरूम हेराई गर्दछ। त्यहाँ जूनियर सुइट कोठा पनि छ, जम्मा तीन, शयनकक्ष र बैठक कोठा र square० वर्ग मीटर।
होटलको विलासी आकर्षण रेस्टुरेन्टको अनुभव र यसको ग्यास्ट्रोनोमिक अफरबाट पूरक छ। त्यहाँ Zocodover अनदेखी भोजनालय छ र त्यहाँ एक क्याफे, Café el Español, जो पेय र दिउँसो चिया सेवा गर्दछ। स्वाभाविक रूपमा यो केवल टोलेडोको महान शहरमा मात्र होटेलहरू होइनन्, तर मलाई आशा छ कि उनीहरूले तपाईंको शताब्दी-पुरानो शहरको अर्को भागमा सेवा गर्नेछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » टोलेडो मा बुटिक होटल